Sawirro:- Gurmadkii ugu balaarnaa oo maanta ka baxay Garowe iyo Dani oo ka hadlay | Somsoon
Home WARAR Sawirro:- Gurmadkii ugu balaarnaa oo maanta ka baxay Garowe iyo Dani oo...
Garowe Madaxweynaha maamul Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta ka qeyb galay Xafladda Ambabixinta Gurmadka Puntland u dirtay dadweynaha magaaladda Beledweyne oo ay waxyeelo ka soo gaartay fatahaaddii Webiga Shabeelle.
Madaxweyne Siciid Deni ka qeyb galkiisa xafladda lagu sagootiyey gurmadka loo diray Beledweyne waxaa ku wehliyey xubno ka tirsan labada Gole, Maamulka degmada Garowe, kan gobolka Nugaal, Culimo iyo Ganacsato, kuwaas oo ka soo wada shaqeeyay isku soo duwidda gurmadkan.
Gurmadka maanta loo ambabixiyey Beledweyne oo intiisa badan laga soo ururiyey magaalada Boosaaso, waxaa uu ka koobanyahay 20 Gaari oo nooca xamuulka qaada ah, oo ay saaranyihiin 12,733 Kiish oo Raashin ah, Dhar iyo agabyo kale, waxaana deeqdan loo qorsheeyay sida ay sheegtay Puntland in la gaarsiiyo 7000 oo qoys, kuwaas oo ka barakacay magaaladoodii ay ku noolaa jireen ee Beledweyne.
Madaxweyne Deni ayaa bogaadiyey dadaalka iyo isxilqaanka reer Puntland sameeyeen si loo caawiyo dadka Fatahaadda Webiga Shabeelle saameysay “Waa waajib Dowladd iyo Shacaba saaran qeyb naga mid ah hadii masiibo ku dhacdo in loo gurmado”Ayuu yiri Dani.
Sidoo kale Dani ayaa sheegay in dadweynaha reer Puntland uu uga mahadcelinayo sida ay uga jawaabeen baaqii maamulkiisu uu u diray ee ahaa in shacabku kala shaqeeyo sidii gargaar wax ku ool ah loo gaarsiin lahaa walaalaha ku dhibaateysan duleedyada magaalada Beledweyne, waxa uuna Dani si gaar ah u xusay doorkii Culimada, Ganacsatada iyo Dhallinyarada reer Puntland oo fir-fircooni ka muuqatay sida uu sheegay.
Gurmadka ay maanta Puntland u dirtay magaalada Beledweyne ayaa ah kii ugu balaarnaa ee Puntland dirto sida ay cadeeyeen xubnihii ka hadlay xafladdii lagu sagootinayay, waxaana kan ka horeeyay shan gaari oo nooca xamuulka qaada ah oo ay dirtay Puntland, kuwaas oo ka ambabaxay magaalooyinka Gaalkacayo iyo Garowe ee ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Nugaal.
Article horeKhayre oo shirka Paris madaxda caalamka uga dalbaday hal arin
Article socoda Nigeria’s spy chief pays secret visit to Somalia, GO